Izindaba - Umbukiso Wokuphrinta Wokupakisha WaseHong Kong Womhlaba Wonke
Umbukiso wesikhombisa Wokuphrinta nokuPakisha waseHong Kong Womhlaba uyipulatifomu yebhizinisi ehloniphekile futhi engajwayelekile eyenzelwe indawo eyodwa embonini. Sekuyibhuloho elibalulekile nehabhu elixhumanisa abahlinzeki benkonzo yokuphrinta nokupakisha nabakhiqizi bomhlaba wonke, abahlinzeka ngemisebenzi kanye nabahwebi. Lapha, ababonisi bazohlinzeka ngezixazululo ezahlukahlukene zokuphrinta nokupakisha, izinto zokwakha zakamuva kanye nemishini, kanye nezinsiza zokuphathwa kwezinto, njll ukuhlinzeka abathengi abavela kuzo zonke izizinda badinga izinsizakalo zokuphrinta nokupakisha ukuze banikeze ukukhetha okucebile kwezixazululo, ukusiza amabhizinisi okuthuthukisa isithombe nobuhle bemikhiqizo, ngaleyo ndlela andise ukuncintisana kwemikhiqizo.
Umbukiso wamukelwa kahle yimboni, njengoba kungabonakala ekwandeni okuqhubekayo kwenani labakhangisi nabathengi. Kusukela ngo-2011, lo mbukiso udonse ababonisi abangaphezu kuka-320 abavela emazweni ayisishiyagalombili nezifunda, okubalwa kuzo iHong Kong, i-Mainland China, iJalimane, iKorea, iPhilippines, iSingapore, iThailand neTaiwan, ezimele ukwanda ngo-22.8%. Ngosizo lwalesi sakhiwo samazwe omhlaba sokuhweba nokwenyusa se-pudong, umbukiso ufinyelela kubasebenzisi bokugcina, ama-ejenti wokuphrinta, abashicileli, abakhiqizi, izinkampani zokuphrinta nezokupakisha, abathengisi, abaklami kanye nezinkampani zokukhiqiza ezimbonini ezahlukahlukene. Isibalo sabathengi abebehambele unyaka odlule besingaphezu kuka-11 000, okuyisibalo esikhuphuke ngo-6.4%, kanti besivela emazweni nezindawo eziyi-109.
Ukupakisha kweHongbang kuyaphuma futhi, kubheke umhlaba, kubhekene nawo wonke umuntu. Ukukunikeza kuphela insizakalo yobuchwepheshe kanye nemikhiqizo esezingeni eliphakeme kakhulu. Imikhiqizo yethu imboza ukudla, amakhemikhali ansuku zonke, okwenziwa kwemithi, ama-agrochemicals, i-electronics, izinto zokwakha neminye imikhakha. Kunikezelwe ekulawulweni kwekhwalithi eqinile nokusebenza kwamakhasimende okucabangayo, abasebenzi bethu abanolwazi bahlala batholakala ukuxoxa ngezidingo zakho nokuqinisekisa ukwaneliseka kwakho. Noma ngabe i-oda lakho lincane noma likhulu, lilula noma liyinkimbinkimbi, sicela ungangabazi ukuxhumana nathi. Insizakalo enhle nekhwalithi eyanelisekile ihlale inawe.